Ivory Coast waxay heshay tallaalka Astra Zeneca Oxford
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Ivory Coast waxay heshay tallaalka Astra Zeneca Oxford
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Cote d'Ivoire • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Tallaalka Astra Zeneca Oxford waxaa loo soo gudbiyay Côte d'Ivoire
Bixinta AstraZeneca / Oxford jabs, kadib markabkii ugu horreeyay ee taariikhi ah oo la geeyo Ghana horraantii toddobaadkan, waxay muujineysaa iskaashi caalami ah oo aan horay loo arag si loo bixiyo ugu yaraan laba bilyan oo qiyaas tallaal ah coronavirus dhammaadka sanadkan.
2. Qiyaasta tallaalka waxaa UNICEF ka soo rartey magaalada weyn ee Hindiya ee Mumbai, iyada oo loo sii mariyey xarunteeda sahayda ee gobolka, Dubai, ilaa caasimadda Côte d'Ivoire, Abidjan, iyada oo qayb ka ah wareegii ugu horreeyey ee tallaallada oo loo sii waday dhowr waddan oo dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexe. .
3. Dhanka kale, UNICEF iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa wada shaqeynaya si ay uga caawiyaan dalal badan diyaarinta tallaalka soo-saarka COVID-19.
Tallaalada loo siman yahay
Jean-Marie Vianney Yameogo, oo ah wakiilka WHO ee Côte d'Ivoire, ayaa tiri "maanta waa talaabada ugu horeysa ee muhiimka ah ee lagu gaarayo aragtideena la wadaago ee sinaanta talaalka, laakiin waa bilowga kaliya". Ivoire waxay ka mid tahay waddammada ugu horreeya Afrika ee qaata tallaalka AstraZeneca / Oxford iyadoo loo marayo COVAX Facility. ”
Maaddaama Cudurka faafa ee adduunka ee loo yaqaan 'COVID-19' uu galaaftey boqolaal kun oo qof isla markaana uu khalkhal geliyey balaayiin kale, Mudane Yameogo waxa uu carrabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la yareeyo dhimashada, isla markaana la xakameeyo aafada. Tallaalku wuxuu kaloo gacan ka geysanayaa kahortagga khasaaraha bil kasta lagu qiyaasay ku dhowaad $ 375 bilyan ee dhaqaalaha adduunka.
“Helitaanka tallaal caalami ah oo loo siman yahay, kaas oo ilaalin doona shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa halista ugu badan ugu jira in si gaar ah cudurka loo qaado, waa sida kaliya ee lagu yareyn karo saameynta cudurkan faafa ee caafimaadka bulshada iyo dhaqaalaha,” ayuu hoosta ka xariiqay Mudane Yameogo.
Si horay loogu socdo
Dhanka kale, UNICEF iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa si wada jir ah uga shaqeynaya sidii ay uga caawin lahaayeen dalal badan sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen soo saarista tallaalka COVID-19.
Talaalku wuxuu badbaadiyaa nolosha. Maaddaama shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee safka hore ay tallaalan yihiin, waxaan arki doonnaa in si tartiib tartiib ah loogu soo laabto caado… gaar ahaan carruurta ”, ayuu yiri Marc Vincent, Wakiilka UNICEF ee Côte d'Ivoire.
"Marka la eego dareenka guud ee caafimaadka, waa inaannaan cidna uga harin", ayuu ku nuuxnuuxsaday.